ဒါကတော့ pdf ကနေ word ကို ပြောင်းတဲ့ pdf converting software တစ်ခုပါ . ဘယ် pdf အမျိုးအစားပဲဖြစ်နေ ဖြစ်နေ ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ် . MS 2007 မှ 2003 မှ မရွေးပါဘူး . ကြိုက်တဲ့ Microsoft office နဲ့ဖွင့်ပါ ဖွင့်လို့အဆင်ပြေပါတယ် . အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .